Umsuka wegama elithi toubab - AFRIKHEPRI
Umsuka wegama elithi toubab
Imfihlakalo yamaPramidi aseShayina - I-Documentary (2016)
TI-oubab (eWolof tubaap, tubaab, futhi i-toubabe, i-toubabou, i-tuab, i-tubab) igama elisetshenziswe eNtshonalanga Afrika, ikakhulukazi eSenegal, Mauritania, Gambia naseMali, kepha nase-Ivory Coast, khetha noma yimuphi umuntu onesikhumba esimhlophe, ngaphandle kweBerber Arabo, noma ngabe yiluphi ubuzwe. Ngakho-ke kubhekiselwa kubantu baseYurophu.
Kungaba ukuguqulwa kwegama lesi-Arabhu tabib ' (kusho udokotela) ekhonjiwe ngenhla. Kukhona nesenzi sesi-Wolof esisho ukuguqula ngoba izithunywa zevangeli zokuqala ngezikhathi zamakholoni zazingabantu abamhlophe abavela eYurophu. Ukuhlanekezelwa kwesiNgisi bob ezimbili okusho ama-shillings amabili, imali esetshenziswa e-United Kingdom.
Enye incazelo kungaba ukuthi kusho ukusuka olwandle, ukuklama imodi yokufika kwabaseYurophu bokuqala. Kodwa-ke, umsuka okungenzeka kakhulu ukuthi uvela egameni elithi Wolof elisho iYurophu: Tougal. Ngendlela efanayo uWolof asho ngayo abantu bejolof, iToubab izosho abantu be-tougal.
Ukusekela Afrikhepri - Donate
Imijikelezo eyisishiyagalombili yokwazi
Afrikhepri Foundation on Ubuntwana benkosi - Imibhalo (2018): "Uhambo oluyingqayizivele lwenkosi yangokomoya yesikhathi esizayo: Idokhumentari enhle ongayibuka!" Jul 6, 01:32
Afrikhepri Foundation on Impi Yezinsuku - Imibhalo (2016): "Sizoba nokudla kwe-GM kuphela kusuka ezitshalweni ze-transgenic kungakapheli iminyaka eyi-15!" Jul 6, 01:27
Afrikhepri Foundation on Bukela ukulingana 2 (2018): "I-movie enhle ongayibona!" Jul 6, 01:21